We Fight We Win. -- " More than Media ": ကာချုပ် မင်းအောင်လှိုင် က ဘယ်လုိုလဲ လူ
ကာချုပ် မင်းအောင်လှိုင် က ဘယ်လုိုလဲ လူ
ဒီနှစ် တပ်မတော်နေ့ မှာ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် မင်းအောင်လှိုင် စကားပြောရပါတော့မယ်။
သူဘာတွေပြောမလဲ။ တပ်မတော်နေ့ မှာ ဦးစီးချုပ် တွေက အစဉ်အလာအရပြောတဲ့မိန် ခွန်းတိုင်း
ဟာ နိင်ငံတော်လုံခြုံရေးတို့ ၊ ပြည်ပကျူးကျော်မှုတို့ ၊ နိင်ငံကြီးတနိင်ငံက ခြိမ်းခြောက်နေတယ်။
ပြည်တွင်းအဖျက်သမား၊ လွတ်လပ်ရေး၊အချုပ်အခြာအာဏာ၊ အစဉ်အလာကြီးမားတဲ့တပ်မတော်
စတဲ့ ရိုးအီနေပြီး အသုံးမ၀င်လှတဲ့ စကားလုံးတွေကို ကြက်တူရွေးအာခေါင်နီလို ရွတ်နေမလား
ဆိုတာကို လူတိုင်းက စိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။
အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး အတွက် နိင်ငံရေးအင်အားစုတွေပါဝင်နိင်ဖုို့ ၊ တိုင်းရင်းသားတွေ
နဲ့လက်တွေကျတဲ့ အပြစ်ခတ်ရပ်စဲရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ ကို တပ်မတော်အနေနဲ့ တက်ကြွ
စွာ ပါဝင်လှုပ်ရှား ရေးအခြေခံပေါ်မှာ ရပ်တည်ဖို့ လိုနေပါတယ်။
ဒီလိုမဟုတ်ပဲ ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံအခြေခံကို အသက်နဲ့လဲ ကာကွယ်ထိမ်းသိမ်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့
တပ်မတော်ဦးစီးချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ဟာ ပြည်သူ တွေ ရဲ့မျော်လင့်ချက် အလင်းရောင်တခု ဖြစ်လာမှတော့မဟုတ်ပဲ။ အမုန်းကိုခံရသူဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ဟာ အများသူငါယူဆနေသလို ဦးသန်းရွှေ နဲ့ ဒေါ်ကြိုကြိုင် တို့နဲ့ နီးစပ်သူလား ပြည်သူနဲ့ နီးစပ်သူလားဆိုတာ မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ မှာအဖြေပေါ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘာကောင်လဲတောမသိဘူး။ တရုတ်သွေးပါတာတော့ သေချာတယ်။ သောက်တရုတ်တွေကို တိုင်းပြည်ကနေ မောင်းထုတ် နယ်စပ်လုံအောင်ပိတ် မဟုတ်ရင် အောက်ဗမာပြည်က မန်းလေး သွားဘို့ ဗီဇာယူရမှာ ဖြစ်ပြီး မန်လေး ကနေ ပီကင်းကို ဗီဇာမလိုသွားနိုင်လိမ့်မယ်။
He is the new generation of Military Gangster.
It can be expressed that Nay Win is his granfather as well as his teacher.Than Shwen is his father.
All what he learn from his grant father anf father is only the system of Military Gang.
He does not know 1)The great value of Democracy 2)How to set up internationl long-term economic foundation ofacountry for growing up the living standard of citizens.
Even he does not know the truth reason of "why Burma becomes the poorest in the world under the Military Government for 50 years.
the last is that...
He does not know how to wash out the 50 YEARS ROOTED BAD MORAL of Military Gangsters.
That is "Military gangsters miss-usinng up millions of country moneys" for the family and relatives.